जनता र ग्लोबल आइएमईको बिग... :: रोशन सिग्देल :: Setopati
जनता र ग्लोबल आइएमईको बिग मर्जरले बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्ला?
रोशन सिग्देल काठमाडौं, मंसिर २०
शुक्रबारदेखि नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंकको रुपमा ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्नो औपचारिक कारोबार सुरु गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा‍ युवराज खतिवडाले संयूक्त कारोबारको उद्घाटन गरे।
जनता बैंक ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्ज भएपछि अब नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या २७ मा झरेको छ। मर्जसँगै ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुग्ने छ। घोषणा भएको बोनस शेयर वितरण नभएकाले अहिले बैंकको पुँजी १८ अर्ब ४३ करोड छ।
मर्जरपछि सबैभन्दा धेरै निक्षेप संकलन गर्नेमा ग्लोबल आइएमई भएको छ। बैंकको २ खर्ब १३ अर्ब निक्षेप छ। यसअघि १ खर्ब ८७ अर्ब सहित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा बढी निक्षेप रहेको बैंक थियो।
यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्जा परिचालन १ खर्ब ९४ अर्ब छ भने बैंकको शाखा कार्यलय ३ सय पुगेको छ। बैंकका २ सय ५९ एटिएम मेसिनले सेवा दिइरहेका छन्। सबैभन्दा ठूलो याे बैंकमा ३ हजार २ सय ५० कर्मचारीले काम गर्छन्।
मर्जरपछि बैंकको अध्यक्षमा चन्द्र ढकाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर नियुक्त भइसकेका छन्। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेसँगै यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाले सरकारी बैंकभन्दा पनि ठूलो बैंक भएकाले यसकाे लागत घट्ने र सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्ने विस्वास गरेका छन् ।
‘मर्ज भएपछि त्यसको असर सर्वसाधारणलाई हुन पर्छ, त्यसैले अबको केही महिनामा बैंकले आफ्नो आधार दर तथा कर्जा दर घटाउछ भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘यसले प्रविधिमा लगानी गर्ने र अत्याधुनिक बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्छ।’
काठमाडौंमा मात्रै बैंकहरु केन्द्रित भएको आरोप लागिरहेको बेला मर्जर पछि बनेको सबैभन्दा ठूलो बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि शाखा विस्तार गरेर दूर दराजमा रहेकालाई सेवा दिनुपर्ने थापाले बताए ।
यस्तै नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह पनि बिग मर्जले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन पार्ने बताउँछन्।
‘बैंकको ठूलो पुँजी र ठूलै बचत भएकाले नेपालका ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्नेछ ’ उनले भने ।
यो मर्जरले अन्य बैंकलाई पनि ठूलो बन्न प्रोत्साहन गरेकाे उनले बताए। यद्यपी यो ठूलो बैंकले नेपालका अरु बैंकहरुलाई चुनौति भने नथपिने उनले दावी गरे।
‘विदेशी लगानी सहित २० अर्बको नयाँ बैंक आएको भए त्यसले बजारमा पार्ने प्रभावको बारेमा धेरै सोच्नु पर्ने थियो, यो त पहिलेदेखि नै काम गरिरहेका दुई ठूला बैंकहरु मिलेर एउटा बैंक बनेको हाे, त्यसैले यसले ठूलो चुनौति दिएको छैन', उनले भने।
सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा यो मर्जरले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा कुनै असर नपर्ने बताउँछन्।
अनिल शाहजस्तै शर्माले पनि २० अर्ब पुँजीको नयाँ बैंक आएकाे भए मात्रै त्यसले केही असर पार्ने तर्क गरे।
उनले भने, ‘पुराना दुई बैंक नयाँ बन्दैमा त्यसले बजारमा कुनै असर पर्दैन। यसले न ब्याजदर कमी ल्याउने देखिन्छ न अन्य कुनै प्रकारको प्रभाव पार्छ ।’
बैंक ठूलो हुँदैमा सेवा सुविधा स्तरीय हुन्छ भन्न नमिल्ने बताउँदै उनले कर्पोरेट कल्चर मुख्य विषय रहेको औंल्याए। यद्यपी मर्जका लागि अरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने उनको भनाइ छ।
‘मर्जर आफैमा राम्रो कुरा भएकाले अन्य बैंकलाई यसले मर्जरको लागि प्रेरणा दिएको छ', उनले भने ।
बैंकर्स संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष भुवन दाहाल मर्जरले बैंकिङ प्रणालीमा सिनर्जी इफेक्ट देखिए मात्रै मर्जरमा जानुको औचित्य रहने बताए।
मर्जर पछि बैंकमा सिनर्जी इफेक्ट देखिए अन्य बैंकलाई मर्जरमा जान प्रेरणा मिल्ने उनको तर्क छ। बैंकर्स संघको तर्फबाट देशकै ठूलो बैंक बनेकोमा ग्लोबल आइएमई बैंकलाई दाहालले शुभकामना समेत दिए।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६, ०७:०५:००
सरकारले तोक्यो सन्दर्भ ब्याजदर, सहकारीले १४‍‍. ७५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने
वाणिज्य बैंकहरुमा ३५ खर्ब नाघ्यो निक्षेप, सातामा ९ अर्ब बढ्यो कर्जा
एनआइसी एशियाको चेक जम्मा गर्न अनलाईनबाटै भौचर भर्न सकिने